China Class 1 class0ရော်ဘာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | CESE2
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သားညှပ်ပေါင်မု panel ကို
EPS သားညှပ်ပေါင်မု panel ကို
မဂ္ဂနီစီယမ်အောက်ဆိုဒ်သားညှပ်ပေါင်မု panel ကို
ဆီလီကွန်ရော့ခ်သားညှပ်ပေါင်မု panel ကို
မဂ္ဂနီစီယမ် oxysulfate သားညှပ်ပေါင်မု panel ကို
PU polypurethane သားညှပ်ပေါင်မု panel ကို
ရော့ခ်သိုးမွှေးသားညှပ်ပေါင်မု panel ကို
ပျားလပို့ကိုသားညှပ်ပေါင်မု panel ကို
FFU ပန်ကာ filter ကိုယူနစ်
မြင့်မားသောထိရောက်မှု filter ကို
မိုးလုံလေလုံ bracket ကတံခါးကို
ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော & ချေးမှုသန့်ရှင်းသောချောင်းအလင်း
စင်ကြယ်သောအခန်းတံခါး & ပြတင်းပေါက်
ဖြတ်တောက်ခြင်း - Edge Technologies က
passbox / လွှဲပြောင်းဝင်းဒိုးကို
ရေနုတ်မြောင်းပလပ်စတစ် PVC -...
ရေနုတ်မြောင်းပလပ်စတစ် PVC ...
ရေချိုးနိုင်သောအစားထိုး alumin ...
စက္ကူ box ကိုကတ်ထူပြားဘ ...
အားလုံးသတ္တုအသားတင်မူလတန်းလေထုf...
v-type အမျိုးအစားအလတ်စားထိရောက်မှု ...
အိတ်ကပ်အိတ်လေသန့်ရှင်းရေး med ...
partition အလတ်စားထိရောက်မှု ...
V- ပုံဖော်မြင့်မားသောထိရောက်မှု,f...
non-partition အမျိုးအစားအမျိုးအစား ...
အမျိုးအစားအသစ်အဆင့်မြင့် alumini ...
PVC ထည်သို့မဟုတ်လူမီနီယံ rapi ...
နှစ်ဆ glazing clea ...
စိတ်ကြိုက် alu လူမီနီယံ fra ...
သန့်ရှင်းသော Melamina ဗဓေလသစ် panel ကို ...
အလိုအလျောက်လျှောမြင့်မားသော Qual ...
ကြိုတင် galvanized လှေကားအမျိုးအစား ...
ပူနွေးသော galvanized အစွန်းအထင်း ...
PVC cable ကို inuslated
အနိမ့်သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ဗို့အား overh ...
3 core4core XLPE သီးခြား ...
ရေစိုခံ 9W 18W 25W LED ...
T ကိုရိုက်ထည့် Keel အလင်းချွတ်
LED ပေါင်းစည်းမှု braket ligh ...
စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း 150W 250W 400 ...
ရော့ခ်သိုးမွှေးသားအသားညှပ်ပေါင်မု panel ကို ...
Class 1 အနိမ့်ဆူညံသံချေးခြင်း ...
အတန်း ၁ တွင်စွမ်းအင်ချွေတာရေး ...
Class 1 စွမ်းအင်ချွေတာတဲ့အစွန်းအထင်း ...
အတန်း ၁ တွင်စွမ်းအင်ချွေတာသောခွေ ...
လူမီနီယံ gusset ပန်းကန်သံမဏိ ...
180V ~ 220VAC လူမီနီယံအလွိုင်း ...
70W 100W 150W ကြီးမားသောဗို့အား ...
အတန်းအစား ၁ တန်း0ရော်ဘာပြား ...
ရေစိုခံနိုင်သည့် damp-proof tri -...
ဖုန်မှုန့်ခိုင်ခံ့သောမီး 14W ...
အတန်းအစား 1 14W 18W 28W inverte ...
14W 28W 18W ကွင်းခတ်မီး ...
ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်နှင့် Anti-c ...
အတန်းအစား ၁ တွင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာထည့်သွင်းခြင်း ...
class 1 bevel အစွန်းစင်ကြယ်သောအလင်း
အတန်းအစား 1 နောက်ကျောဓာတ်လှေကားသို့မဟုတ်အောက် ...
လူမီနီယမ်အလွိုင်းမျက်ရည်ကျ -l ...
အတွင်းပိုင်း 400mm 500mm သံမဏိ ...
မီးခံနိုင်သော soundproof therma ...
class1 class0 NBR PVC ပွတ်တိုက် ...
ပူသော dipped zinc coated galv ...
အရောင်အဆင်း GI GL PPGI PPG ...
PU polypurethane အသားညှပ်ပေါင်မုန့် ...
မဂ္ဂနီစီယမ် oxysulfate sandwi ...
50mm 75mm 100mm အထူ p ...
မီးခံ MGO ဘုတ်အဖွဲ့ Magnesi ...
75mm 50mm မီးခံမီးခံ ...
manual magneti ရှိသော ၀ င်းဒိုး ...
စင်ကြယ်သောအခန်းထုပ်ပိုးယူနစ် ce ...
OEM စိတ်ကြိုက်သင်္ဂြိုဟ်ခံအလင်း ...
2020 အရည်အသွေးမြင့်စက္ကူ Hon ...
2020 အရည်အသွေးကောင်း Dynamic E ကို ...
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် Flush တံခါး ...
၁၈ နှစ်စက်ရုံ ခွဲ၍ ...
OEM စိတ်ကြိုက် Electrostati ...
စက်ရုံအခမဲ့နမူနာသံမဏိ F ...
စက်ရုံစျေးပေါသော Hot Cleaning ...
2020 ကောင်းသောအရည်အသွေး Fiberglas ...
သံမဏိ Safet အတွက်အခမဲ့နမူနာ ...
China စျေးနှုန်းချိုသာသော Ahu Air C ...
အသစ်ရောက်ရှိသော Shutter ပိတ်ရန် ...
အတန်းအစား ၁ တန်းမှရော်ဘာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်
Class B1 ရောင်စုံရာဘာနှင့်ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ၏မီးခံစွမ်းဆောင်ရည်သည် GB 8627“ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၏လောင်ကျွမ်းခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနည်းလမ်း” တွင်သတ်မှတ်ထားသောမီးလောင်လွယ်သောလူတန်းစား B1 နှင့်အထက်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီသည်။ ထူးခြားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးဖော်မြူလာ (လောင်ကျွမ်းခြင်းအခြေအနေရှိပစ္စည်း)၊ မီးခိုးငွေ့အာရုံစူးစိုက်မှုသည်သေးငယ်သည်၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမီးခိုးထွက်စေသည်ကိုမတားဆီးနိုင်ပါ။
စီးပွားဖြစ် nano micro foam နည်းပညာ၊ အပူစီးကူးမှုနိမ့်သည်
အရောင်ရော်ဘာနှင့်ပလတ်စတစ် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းအပြည့်အဝစီးပွားဖြစ် nano micro မြှုပ်နည်းပညာ, ဒါကြောင့်သေးငယ်တဲ့လေအိတ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ပစ္စည်းအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းခြင်း; အပူစီးကူးမှုနိမ့်ကျပြီးပိုမိုတည်ငြိမ်စေရန်အတွက်လုံးဝပိတ်ထားသောပူဖောင်းအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသိသာထင်ရှားစေသည်။
ပတ် ၀ န်းကျင်ကျန်းမာရေး၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလေအေးပေးစက်
အဆိပ်မရှိ၊ အနံ့မရှိ၊ ဖိုင်ဘာမရှိ၊ ဖုန်မှုန့်၊ formaldehyde၊ cyanide နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများ၊ အော်ဂဲနစ်တည်ငြိမ်မှုနည်းပါးခြင်း၊
ရောင်စုံရော်ဘာနှင့်ပလတ်စတစ် insulator တွင်ရှိသောပစ္စည်းများကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ, လှပသောအသွင်အပြင်နှင့်အလှဆင်စရာမလိုပါ။ ထို့အပြင်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းစဉ်ဇုန်များ၏အမြင်အာရုံစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စီမံကိန်း၏အလုံးစုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အရောင်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်း၊ စိတ်ကြိုက်အရောင်၊ ရိုးရှင်းသောဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း။
GB ကို / T က 17794
GB ကို / T က 8624
Flame retardant class B1၊ ပေါင်းစပ်အလွှာမဟုတ်သောလောင်ကျွမ်းနိုင်သောအတန်းအစား A
0 ℃时.00.032 W (mk)
၄၀ ℃时.00.035 W (mk)
.89.8 × 10-1g / (mspa)
GB ကို / T က 17146
N7N / cm
GB ကို / T က 10808
compression ပြန်ခုန်ထွက်နှုန်း (compression rate 50%, 72h)
GB ကို / T က 16259
ရှေ့သို့ 18W 40W 80W သည်စင်ကြယ်သောအခန်းအတွက် LED SMD သန့်ရှင်းသောအလင်းကိုပါ ၀ င်သည်
နောက်တစ်ခု: 70W 100W 150W ကြီးမားသောဗို့အား LED စီမံကိန်းမီးအလင်း
အအေးရှင်းသောသံမဏိကွိုင်အအေးလှိမ့်အပြည့်အဝ hard st ...
>> အေးမြသောသံမဏိကွိုင် (CRC) ၏ဖော်ပြချက် COLD ROLLED STEEL COIL သည်အပူပေးသောသံမဏိပြားကိုကောက်ယူပြီးသင့်တော်သောအပူချိန်တွင်အထူထက်ပိုမိုပါးလွှာသောလှိမ့်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်သုံးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ စံသတ်မှတ်ချက် JIS G 3141: ၂၀၀၅ SPCCT-SD SPCD-SD၊ SPCE-SD၊ SPCF-SD၊ SPCG-SD ASTM A1008 CS TYPE A / B / C DS TYPE A / B, DDS EDDS EN ...
အမိုးပွင့်အတွက်လက်ဖ ၀ ါး GL galvalume သံမဏိကွိုင် ...
55% AL-ZN COATED သံမဏိ COIL သည်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသောအလူမီနီယမ် - သွပ်သတ္တုစပ်၊ ၅၅% အလူမီနီယံ၊ ၄၃.၄% သွပ်နှင့် ၁.၆% ဆီလီကွန်တို့ဖြင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသောသံမဏိအလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Aluzinc ၏ချေးငွေသည်ခံနိုင်ရည်ရှိသောသတ္တုဒြပ်စင်နှစ်ခု၏ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလူမီနီယမ်၏အပေါ်ယံသက်ရောက်မှုသည်အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသွပ်၏ယဇ်ကောင်ကာကွယ်မှု။ အထူ Range 0.14 mm - 2.00 mm Width Range 600 mm - 1250 mm ...
ရေနုတ်မြောင်းပလပ်စတစ် PVC ပိုက် flared
PVC ပိုက်သည်စက်မှုနှင့်ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်တံခါး၊ ရေနုတ်မြောင်း၊ မိလ္လာပိုက်စီမံကိန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းစနစ်၊ ဓာတုရေနုတ်မြောင်း၊ apron) S、 SDR အမည်ခံအပြင်ဘက်အချင်း (မီလီမီတာ) နံရံအထူ (မီလီမီတာ) အမည်ခံဖိအား 0.63MPa S16 SDR33 63 2.0 75 2.3 90 2.8 S20 SDR41 110 2.7 125 3.1 140 3.5 160 ...
Angle သံမဏိသည်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီအမျိုးမျိုးသောစိတ်ဖိစီးမှုအစိတ်အပိုင်းများ၏မတူညီသောလိုအပ်ချက်များကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်္ဘောများ၊ ကွန်တိန်နာများ၊ စက်မှုမီးဖိုများ၊ တုန့်ပြန်မှုမျှော်စင်များ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ၊ ပါဝါပိုက်များ၊ ဘတ်စ်ကားတန်းများနှင့်ဂိုဒေါင်စင်များစသည့်ဗိသုကာနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအဆောက်အအုံအမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ သိုလှောင်မှုအတွက်ကုန်ကြမ်းထိတွေ့မှုသံမဏိထောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်း။
201 202 301 304 316 သံမဏိပြားလေး ...
FLAT BAR သည်ဖြတ်သန်းထားသောစတုဂံများနှင့်အနည်းငယ်တုံးနေသောအစွန်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာချောသံမဏိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သံမဏိများ၊ ကိရိယာများနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုသံထည်နှင့်သံမဏိကြိုးများတပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သံမဏိများကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည့်အခါအခန်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ လှေခါးထစ်နှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးရာတွင်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များအရအထုပ်အပိုးအလေးချိန်ခန့်တန်ချိန် ၂ တန်ခန့်ရှိသောအရွယ်အစားတစ်ခုစီစီတန်ချိန် ၂ တန်ခန့်လက်ခံရရှိပြီးချိန် ၁၅-၂၀ ရက် ...
Centrifugal ဖန်သိုးမွှေးသည်အရည်ပျော်သောဖန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော centrifugal မှုတ်ခြင်းဖြင့် thermosetting resin ဖြင့်ပက်ဖျန်းပေးပြီးအပူဖြင့်ကုသခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းစွာပြုပြင်ခြင်းကိုခံနိုင်သည်။ board, Fiberglass ပြွန်၊ လေအေးပေးစက်ပျဉ်ပြား၊ အပူချိန်မြင့်မားသောဖန်သားမွှေးစသည်တို့။ >> ကုန်ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စံနှုန်းများ - 1. အပူပေးခြင်းဖြင့်အပူပေးခြင်း၊ အသံစုပ်ယူခြင်းနှင့်ဆူညံသံလျော့ချခြင်း ၂ ။
36/151 အဝေးပြေးလမ်းမ Khlong Song Ton Ton Nun ခရိုင်၊ ဘန်ကောက်၊ လတ်ကဘရားခရိုင်၊ ၁၀၅၂၀
+86 1390 1515 693 (ထုတ်ကုန်များ)
+86 1816 8901 913 (အင်ဂျင်နီယာ)